UZinnbauer uncome uMhango eklonyeliswa
UJOSEF Zinnbauer ongumqeqeshi we-Orlando Pirates nomdlali wezakhe uGabadinho Mhango baklonyeliswe njengabashaye into ecokeme kwi-Absa Premiership ngenyanga kaJanuwari
ZAKHELE XABA | February 14, 2020
UMQEQESHI we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer, utusa amagalelo omgadli uGabadinho Mhango akholwa wukuthi ukube ebekhona ngabe abawashiswanga ijezi zibekwa yiBidvest Wits kwiNedbank Cup.
Izolo, uZinnbauer waseGermany, umenyezelwe njengomqeqeshi ovelele wenyanga uJanuwari kwi-Absa Premership. UMhango ukhale wemuka nomklomelo we-Absa Premiership Player of The Month. UZinnbauer, otheleke eMzansi ngoDisemba, unyusele iPirates endaweni yesibili kwi-log yePremiership emuva kokuwina imidlalo ilandelana. NgoJanuwari eZimnyama ziwine imidlalo emine kweyisihlanu zihlula iPolokwane City, Mamelodi Sundowns, Highlands Park naMaZulu, zashaya amagoli angu-10. Zibanjwe yiBloemfontein Celtic kuphela. UMhango, ozihola phambili ngamagoli angu-14 kwiPremiership, ushaye inethi kuyona yonke le midlalo. UZinnbauer ukhale ngaphansi okokuqala kusukela efike eMzansi ngesikhathi ehlulwa yiWits kumaphenathi kwiNedbank Cup ngempelasonto edlule.
“Angazi ukuthi yini engimenza yona. Ucabanga inethi nje futhi abadlali bayamphakela amabhola. Unamava futhi ungena khaxa endleleni esidlala ngayo. Ngicabanga ukuthi uyayithanda. Udlala kahle futhi ngiyajabula ukuthi nginaye eqenjini. Ngesonto eledlule nginesiqiniseko sukuthi ukuba ubekhona uGaba besizowina. Kodwa angisho ukuthi abanye abadlalanga kahle. Sidlale kahle kakhulu. Kodwa lawa amagxathu esiwathathayo ngokudlala, ukushaya amagoli nokuzethemba. Yilezo izinto esizidingayo manje. Siyazithemba kodwa uma kukhona uGaba kuba kuhle kakhulu. Akusiyena kuphela sinabadlali abaningi abangashaya into ecokeme. Sithemba ukuthi bazokwenza lokho kule midlalo ezayo,” kusho uZinnbauer.
Nakuba kucaca ukuthi iPirates izoba yingozi embangweni weligi kodwa uZinnbauer akafuni ukuyikhuluma. I-Pirates isele ngamaphuzu ayisishiyagalolunye kwiKaizer Chiefs esesicongweni se-log.
“Okwethu wukunaka amaphuzu amathathu, hhayi isicoco seligi. Isicoco siphezulu ezintweni ezidingekayo kodwa ngeke sikhulume ngaso manje kwisizini. Sisele kakhulu ngamaphuzu kwamanye amaqembu, amanye asele ngemidlalo. Ngibuka i-log ngithi sisendaweni yesibili kodwa siyalazi ibhola. Kusafanele sinyuse izinga,” kusho uZinnbauer.
Ngokuwina umklomelo ubonge abadlali nabaphathi.
Emdlalweni ozayo iPirates izovakashela iBlack Leopards kowePremiership eThohoyandou Stadium, eLimpopo ngeSonto ngo-3.30 ntambama.